Nlaghachi na itinye ego (ROI) nke Ahịa akpaaka akpaaka | Martech Zone
N'afọ na -esote, Automation Marketing na -atụgharị 30! Ee, ị gụrụ nke ọma. Ọ bụ ezie na ọ dị ka nke a ugbu a teknụzụ zuru ebe niile dị obere ka nwere pimples, nke bụ eziokwu bụ na akpaaka akpaaka ahịa (Map) lụọla nwanyị ugbu a, nwee nwa nkịta, ọ nwekwara ike ịmalite ezinụlọ n'oge adịghị anya.
Na Demand Spring kacha ọhụrụ akụkọ nyocha, anyị nyochara steeti teknụzụ akpaaka akpaaka taa. Anyị kpughere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị otu ka na -agbasi mbọ ike ịlele ROI nke akpaaka ahịa. O juru anyị anya? Ọ bụchaghị. Ọ bụ ezie na ahịa MAP karịrị USD 4B taa, ọtụtụ ndị otu B2B ka na -agbasi mbọ ike na njiri mara ahịa.
Ozi ọma ahụ bụ na maka ndị nwere ike tụọ ROI nke akpaaka ahịa, nsonaazụ ya siri ike. 51% nke ndị otu na -enwe ROI karịrị 10%, 22% na -ahụkwa ROI karịa 22%.
Ọnụ Ọgụgụ ghọtara
Ekwenyesiri m ike na ọnụ ọgụgụ ndị a enweghị nkọwa. Mgbe ị tụlere na ndị na -azụta ngwaahịa na ọrụ B2B taa na -eduzi ọtụtụ agụmakwụkwọ na usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị, ọ ga -esiri gị ike iche na MAP abaghị uru dị ka nzaghachi ahịa gị na -emepụta.
Ezi ụzọ ịtụle uru bụ site n'echiche ụwa ebe MAP na -adịghị. Cheedị ka ị na -ahazi nzukọ gị taa na -enweghị ike ịhazi nkwukọrịta site na mmadụ na ogbo nke njem onye zụrụ ya. Ma ọ bụ iji mata ndị na-eduga kacha ewu ewu ma nyefee ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo na ụlọ ahịa gị. Cheedị na ịnweghị injin ahịa nke nwere ike ịzụlite na -eduga n'ịkwalite ọsọ ọsọ.
Igodo iji melite ROI nke akpaaka ahịa
Nchọpụta anyị kpughere ụfọdụ isi ihe ndị anyị kwenyere na -egbochi ndị otu ka ha ghara imezu na ịmata ROI nke akpaaka ahịa akpaaka chọrọ. Nke kacha pụta ìhè bụ enweghị ike tụọ ya. Anyị na -aga n'ihu na -achọpụta na ọtụtụ ụlọ ọrụ na -ere ahịa ka bụ ihe kacha mkpa maka ndị otu nyocha azụmahịa ha, yana obere ihe enyere aka nyere ndị na -ere ahịa aka ịlele arụmọrụ. Ịrara teknụzụ nyocha na ndị ọkà mmụta sayensị data iji kwado ndị na -ere ahịa bụ isi.
Nnukwu ihe mgbochi nke abụọ bụ enweghị ndị na -agba nyiwe nke ọma. Anyị jụrụ ndị na -aza ajụjụ ihe bụ isi ihe kpatara na ịghara iji atụmatụ ụfọdụ na MAP ha, 55% kwukwara enweghị ndị ọrụ, ebe 29% chọpụtara enweghị ihe ọmụma na njirimara ndị ọzọ. Obi abụọ adịghị ya na usoro ọkọnọ/arịrịọ na -akwado ndị nwere nka MAP. Ọ bụkwa nnukwu ihe ncheta na mgbe ị na -etinye aka na MAP, ndị isi ahịa kwesịrị ịtụle akụkụ atọ dị oke mkpa nke ọrụ - ndị mmadụ, usoro na teknụzụ.
Enweta ịrụ ọrụ doro anya
Ihe ọzọ wụfuru mgbe ị na -enyocha nsonaazụ akara aka bụ mmụba nke arụmọrụ ahịa nke MAP mepụtara. Anyị kwenyere na nnukwu uru nke MAP bụ ikike inwe mkparịta ụka onwe onye na SCALE. O doro anya site na data ndị na -aza ajụjụ na -aghọtakwa uru a.
Iji hụ Akuko Mgbasa Ozi akpaaka akpaaka na -achọ:
Budata Demand Spring's Marketing Automation Benchmark Report
Tags: chọrọ mmirimapmapnnyocha marketerakụrụngwa ahịaahịa akpaaka n'elu ikpo okwunyocha ahịaakụkọlaghachi azụmaahịaROInnyocha e mere